Watch Watch Winder Safes ထုတ်လုပ်သူ | Weierxin Safe Superier
2004 ခုနှစ်မှစ. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုံခြုံစိတ်ချရသောသေတ္တာထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ။
2 နာရီ Fire Rating Safes
Secure Storage0န်ကြီးဌာန
Custom Safe Box
OEM & ODM ဝန်ဆောင်မှု
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Watch Winder Safe
Watch Winder သည်အလိုအလျောက်နာရီများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်, သင့်တွင်သူတို့အများကြီးရှိလျှင်။ အလိုအလျောက်စောင့်ကြည့်ရေးသည်အတွင်းပိုင်းရှိရဟတ်စက်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်နာရီ0တ်ဆင်ထားသည့်အတိုင်းလှည့်ပတ်ထားသည့်အရာတစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။
Watch Winder သည်ခေါင်းအုံးများလှည့်ပတ်နေပြီးလှည့်ဖျားမှုကိုလှည့်ဖျားစေသည်။ ၎င်းသည်နာရီများကိုအာဏာမကုန်ဘဲရပ်တန့်စေပြီးရပ်တန့်ရန်သင့်နာရီကိုသင်ဝတ်ဆင်လိုသောအခါသွားရန်အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
သို့သော်နာရီ0င်လာသူသည်အလွန်အမင်းအသုံးဝင်နေတုန်းသင်၏နာရီများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်သင့်အားလုံခြုံစွာထားလိုပေမည်။ လုံခြုံမှုရှိခြင်းသည်သင်၏နာရီကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်မလိုလားအပ်သောလူများထံမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကာကွယ်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ကာကွယ်ရန်နှင့်သော့ခတ်ထားကြောင်းသေချာစေသည်။
Watch Winder Safe သင်၏နာရီများနှင့်အခြားအဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုအဆင်ပြေစွာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်း, Modular Winder System နှင့်လက်ဝတ်ရတနာအံဆွဲများပါ0င်သောအရည်အသွေးမြင့်လုံခြုံမှုဖြစ်သည်။ သင်၌ရှိသောအရာကိုရရန်ကြိုးစားသည်, ယခုသင်စောင့်ရှောက်ရန်သေချာစေရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဤလုံခြုံရေးမြင့်မားသော Watch Watch Winder Safe Safes သည်သင်၏အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုအမြဲတမ်းသတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတွင်မှန်ကန်ကြောင်းအာမခံသည်။
Foshan Weierxin Saferxin Safe Product မှအရည်အသွေးမြင့် Watch Winder Saf-1200 WH-1200
* အရွယ်အစား: H1200 * w630 * d600mm* rotor: 12pcs* Lock: အီလက်ထရောနစ်ဂဏန်းသော့ခတ်* မီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - 120 မိနစ်* မော်တာ - ဂျပန်မော်တာ* ဘေးထွက်အစိုင်အခဲသော့ခွန်း, ၎င်း၏အချင်းသည် 30 မီလီမီတာရှိသည်။* လက်ကိုင်:3ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိ
High Quality Fireproof စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Winder Safe DZ-1200 12 နာရီ3လက်ဝတ်ရတနာအံဆွဲမီနူး -Weierxin ကို Safe Co. , Ltd မှအတူ
* Size: H1200 * W700 * D600mm* Lock ကို: လက်ဗွေ + ကိန်းဂဏန်း password ကို* မီးသတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်: 120 မိနစ်* မော်တော်: ဂျပန်မော်တာ*4ဘက်အစိုင်အခဲတုံး၎င်း၏အချင်း 30mm ဖြစ်ပါတယ်။* လက်ကိုင်:3ပြောသော
Watch Winder Safe Box 8 Rotor Fingerprint နှင့် Touch Screen EH-2042-J
* ပစ္စည်း - သံမဏိ + Microfiber သားရေ* အရွယ်အစား: H200 * W420 * D360MM* Lock: Fingerprint + Touch Screen Digital Password* မော်တာ - ဂျပန်မော်တာ*2အစိုင်အခဲသံမဏိသော့ခလောက်, အချင်းသည် 19 မီလီမီတာဖြစ်သည်* အလိုအလျောက် set ကို ဦး တည်ချက်အတွက်စောင့်ကြည့်နှင့်ညာဘက်အလှည့်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းအတွက်တစ်နေ့လျှင်တစ်ရက်အလှည့်အလှည့်။* တစ်နေ့လျှင်ချိန်ညှိနိုင်သောတန်းများသည် 650 မှ 1950 အထိအလယ်အလတ်ကြွင်းသောအရာသည် Myanmed Moblblement မှစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချရန်။* အလိုအလျောက် timer သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်နောက်တစ်နေ့တွင်သူ့ဟာသူပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမလူ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမလိုအပ်ပါ
ဇိမ်ခံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Winder Safe နှင့်အတူအားမိုက်ခရိုသားရေ DZ-1700-Foshan Weierxin ကို Safe
* ပစ္စည်း: သံမဏိ + သားရေ* Size: H1700 * W700 * D600mm* Lock ကို: အီလက်ထရောနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ခတ်* မော်တော်: ဂျပန် Mabuchi မော်တော်*4ဘက်အစိုင်အခဲတုံး၎င်း၏အချင်း 30mm ဖြစ်ပါတယ်။* လက်ကိုင်:3ပြောသော* သားရေ: မိုက်ခရိုသားရေ
Watch Winder Safe Box4Rotors နှင့်လက်ဝတ်ရတနာအံဆွဲ3လက်ဝတ်ရတနာအံဆွဲ
* ပစ္စည်း: သံမဏိ။* အရွယ်အစား: H690 * W625 * D475mm ။* Lock: အီလက်ထရောနစ်သော့ခတ်။* မော်တာ - ဂျပန်မော်တာ။*4Side Solid Steel Bolt, အချင်းသည် 30 မီလီမီတာရှိသည်။* လက်ကိုင်: ဌပုံသဏ္။ ာန်။* အလိုအလျောက်စောင့်ကြည့်နေရာကိုအလိုအလျောက်လှည့်ပြီးညာဘက်အလှည့်ကျအလှည့်ကျအလှည့်ကျအလှည့်ကျ။တစ်နေ့လျှင်ချိန်ညှိနိုင်သောတန်းတူညီမျှသောအင်္ဂါများသည် 650 မှ 1950 အထိအလယ်အလတ်ကြွင်းသောအရာသည် Moblevement ကို Moblevement မှဖြစ်နိုင်ချေရှိသောစိတ်ဖိစီးမှုများကိုလျှော့ချရန်။* အလိုအလျောက် Timer သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်နောက်တစ်နေ့တွင်သူ့ဟာသူပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ မည်သည့်လူသားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမလိုအပ်ပါ။
Tel: + 86 757 86900718
ဖုန်း: + 86 8927210715
WhatsApp: + 86 18927210715
WeChat: + 86 18927210715
Foshan Weierxin Safe Co. , Ltd.
Jenny Fung မှာအရောင်းအရောင်း
Copyright © 2022 Foshan Weierxin Safe Co., Ltd - www.weierxin.com All Rights Reserved.
English Latin Deutsch italiano Español ဗမာ Pilipino bahasa Indonesia ภาษาไทย Bahasa Melayu русский français العربية